७ बर्षको प्रेम र त्यसपछि बिहे तर बिहेको ८ महिनामै भयो डिभोर्स - किन डिभोर्स गर्ने भनेर सोध्दा.... - Khabar Samachar
Home / अन्तर्राष्ट्रिय खबर / ७ बर्षको प्रेम र त्यसपछि बिहे तर बिहेको ८ महिनामै भयो डिभोर्स – किन डिभोर्स गर्ने भनेर सोध्दा….
७ बर्षको प्रेम र त्यसपछि बिहे तर बिहेको ८ महिनामै भयो डिभोर्स – किन डिभोर्स गर्ने भनेर सोध्दा….
2 weeks ago	अन्तर्राष्ट्रिय खबर 370 Views
धोकेवाज प्रेमीको एउटा नमुना घटना भारतको लखनउको हजरतगंज महिला थानामा आएर सार्बजनिक भयो । ७ बर्ष लामो प्रेम पछी बिहे गरेको ८ महिना पछी नै उनले श्रीमतीसंग डिभोर्स मागे । डिभोर्स किन गर्ने, के भयो भनेर सोध्दा ति पतिले पत्नीसंगको सम्बन्ध बनाएको गोप्य फोटो र भिडियोहरु सोसल मिडियामा राखी दिए । यस्तो छ कहानी :
शमिमा र फहद खानको १७ जुलाई २०१६ मा बिहे भएको थियो । शमिमाका अनुसार उनीहरुको भेट करिब ७ वर्षा पहिले भएको थियो । सुरुवात देखि नै फहदले शमिमालाई माया गर्थे अनि उनको पिछा गर्ने गर्दथे । उनको त्यो ब्यबहार देखेर शमिमा पनि मायामा परिन र उनीहरु बीच ७ बर्ष लामो मायाप्रेम चल्यो । अनि १७ जूलाइ २०१६ का दिन पुरा रितिरिवाजका साथ उनीहरुको बिबाह पनि भयो ।
उनीहरुको बिहे भए पनि फहदको परिवार खुशी थिएन । त्यहि कारण उनले शमिमालाई भाडाको घरमा राखेका थिए । जव उनीहरु भाडाको घरमा बस्न थाल तव सासु ससुराले दाइजो माग्न थाले ।
करिब २ महिना पछी २३ अगस्ट २०१६ का दिन फहद साउदी गए । साउदी गएर पनि पत्नी शमिमासंग फोनमा कुरा भइराखेको थियो । यसै बीच फहदका भाइ मालिकले भाउजु शमिमा माथि कुदृष्टिले हेर्न थाल्यो । उसले धेरै पटक भाउजुसंग जवर्जस्ती गर्ने कोशिस गर्यो । यो सब भए पछी शमिमा डराएर सबै कुरा सिधा पति फहदलाई भने ।
सबै कुरा पति फहदले सुने पछी पत्नी शमिमालाई घर फर्किन भने र सोहि अनुसार उनि घर गइन । तर जव उनि घर पुगिन उनले लिएर गएको सबै सामान राखेर शमिमालाई चाहि माइत गएर बस्न भने । जव छोरा आउछ तव आउनु भनेर ।
उनि माइत गएर बसीरहेकी थिइन । ५ मार्च २०१७ को दिन देवरले फोन गरेर उनलाई डरलाग्दो धम्कि दिन थाले । उनले आफ्नै दाजु फहदलाई छोड नत्र ज्यान लिन्छु अथवा एसिड हान्छु भन्न थाले । यो धम्किको बारे उनले पुलिसलाई पनि भनिन तर केहि कारबाही भएन । देवरले पुलिस केस नगर्न पनि धम्कि दिए ।
यसको केहि दिन पछी नै पति फहदले फोनबाट नै डिभोर्स माग्यो । शमिमाले डिभोर्सको कारण बुझ्दा फहदले उनलाई ह्वाट्सएप् र सबै सोसल मिडियामा ब्लक गरि दिए । त्यति मात्र हैन फहदले विहे पछी पतिपत्नी बीच भएको इंटीमेटको गोप्य फोटो र भिडियो नै सोसल मिडियामा राखी दिए ।
त्यो फोटो र भिडियो अझै सोसल मिडिया मै छ तर पुलिसले उनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । भारतीय मिडियाका अनुसार पुलिसले थप छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ ।
Previous जो कसैको आशु झर्छ ! सामाजिक मर्यादाले टाढा बनाएको प्रेम, जसलाई साहस बटालाले आजीवन भुल्न सकेनन
Next ७ प्रदेशको राजधानी कहाँ कहाँ तोकियो ?
आगामी १४ जुन २०१८ बाट रुसमा सुरु हुन गैरहेको विश्वकप फुटबलका लागि २३ देश छनोट, पहिले विश्वकप खेलेका ७ राष्ट्र छनोट चरण मै फालिए – कुन कुन राष्ट्र छनौट भए ?
लगातार मोबाइलमा गेम खेल्नुहुन्छ ? चीनमा २१ वर्षीया युवती बनिन् अन्धो
'' Download राजस्तान, २१ असोज । भारत राजस्तानको शिवजी पार्क स्थित एकै परिवारमा ५ जनाको …